UGreta Thunberg, akayona igama eliphelele uGreta Tintin Eleonora Ernman Thunberg (* Januwari 3, 2003, Stockholm), ungumgqugquzeli wesimo sezulu waseSweden. Ithole ukujwayeleka komhlaba wonke ngemisebenzi eqhubekayo ukusekela isenzo esisheshayo ngokumelene nokushisa komhlaba okuqale ngo-2018 eneminyaka eyi-15.
I-Thunberg iveze ukuthi kube nguLwesihlanu woNhlangano ozoqala ngoNovemba 2018. Imisebenzi yakhe uqobo iqale ngo-Agasti 2018 ngaphambi kweSweden Riksdag (ePhalamende) eStockholm ngaphansi kwesiqubulo esithi Skolstrejk för klimatet (isiteleka sezulu sesimo sezulu) , ebifuna ukuheha ukunakwa okuningi ezinkingeni zokushintsha kwesimo sezulu. Yize iSweden uqobo lwayo selwamukele “umthetho wesimo sezulu othambekele kakhulu emhlabeni” ngokusho kosopolitiki bendawo, bethi leli lizwe lingathathi hlangothi ngo-2045, liveze nokuthi izwe elicebile njengeSweden lingenza okuningi ukuvikela isimo sezulu.
Njengengxenye yeGreta Thunberg Movement, isiteleka sesimo sezulu somhlaba wonke senziwa ngoMashi 15, 2019, kwaba nesilinganiso sokuhambela kwabafundi bezikole zasesekondari ezingaphezu kwezigidi eziyi-1,4 emadolobheni athile angama-300 emazweni ayi-112. Okunye ukuteleka komhlaba wonke kwenzeka ngoMeyi 24, 2019.
Uthole imiklomelo nemiklomelo ehlukahlukene ngemisebenzi yakhe. Isikhathi samasonto onke saseMelika, eluhlelweni lwaso ngoMeyi 27, 2019, sikhethe isishoshovu esineminyaka engu-16 ubudala njengesihloko saso esiyinhloko. Abanye ababukele emhlabeni jikelele bachaza umthelela wemisebenzi yawo njenge- “The Greta Thunberg Effect” futhi bayihlobanisa nokushintshwa okuphawuleka kakhulu kwemvelo ngombono womphakathi. Ngenxa yalomphumela, ababukeli baphinde babheke nemiphumela yokhetho lwePhalamende laseYurophu lango-2019.
UThunberg uphethe izindondo nemiklomelo eminingana, kufaka neRoyal Scottish Geographic Society umfundaze, kanti umagazini i-Time wamqamba ukuthi ungomunye wabantu abangu-2019 abanethonya kakhulu ngo-100 futhi waba ngumuntu omncane kunabo bonke onyakeni.
Amathegi: Greta Greta Thunberg Greta Thunberg Sharon Thunberg